လက်ကိုင်တယ်လီဖုန်း SIM ကဒ်တစ်ခုကို ကျပ်ငွေ ၅ ထောင်နှုန်းနဲ့သာ ပြည်သူတွေ သုံးစွဲခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေးနဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျော့ကျရေးကို အထောက်အကူ ပြုနိုင်မှာဖြစ်လို့ ဒီကိစ္စကို ခွင့်ပြုပေးဖို့ ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် MDC ခေါ် ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေးအဖွဲ့က မနေ့က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဒီတောင်းဆိုမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ကိုထင်ကျော်က အာအက်ဖ်အေကို အခုလိုပြောပါတယ်။
“ငါးထောင်ကျပ်တန် SIM ကဒ်က ပြည်သူလူထု ဆင်းရဲ မွဲတေမှု ပပျောက်ရေးမှာ အထိုက်အလျောက် အထောက်အပံ့ ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ကို ကျွန်တော်တို့က မေတ္တာရပ်ခံချင်တာက ချက်ချင်း လုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကို ချက်ချင်းလုပ်ပေးပါ၊ ပြည်သူလူထု ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို လက်ပိုက် ကြည့်မနေကြပါနဲ့။ ဘယ်လို အစိုးရမျိုး တက်တက်ပေါ့ဗျာ၊ ကျွန်တော်တို့က ပြည်သူလူထု ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ဖို့ အစဉ်တစိုက် တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်”
လူတစ်ယောက် မှတ်ပုံတင်ပြရင် SIM ကဒ် တစ်ခု ၅၀၀၀ နှုန်းနဲ့ မကြာခင်ကာလမှာ ရောင်းချပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မယ်လို့ ရွှေပြည်တံခွန် ကုမ္ပဏီက ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလကုန်မှာ ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာနကလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆက်သွယ်မှု ကွန်ရက်ကို စနစ်တကျ တည်ဆောက်ဖို့ အချိန်တော်တော်ကြာကြာ လိုအပ်နေသေးသလို တည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့လည်း မကိုက်ညီတဲ့အတွက် ကျပ် ၅၀၀၀ တန် ဖုန်းကိစ္စက လောလောဆယ်မှာ မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ တုံ့ပြန် ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔မညီဘူးဆုိေတာ့ မင္းတုိ႔ထုပ္ျပန္ထားတဲ့အေျခခံ ဥပေဒဆုိတာႀကီးက ျပည္သူကုိေအာက္တန္းက်ေစတဲ့ဥပေဒႀကီးျဖစ္ေနၿပီေလ ျပည္သူကုိဆင္းရဲေစတဲ့ဥပေဒႀကီးျဖစ္ေနၿပီေလ ျပည္သူကုိအဆင့္တန္းမမွီေစတဲ့ဥပေဒႀကီးျဖစ္ေနၿပီေလ ၾကည့္လဲလုပ္ၾကပါအုံး အဏာရွင္တုိ႔ရယ္ မေလးရွားမွာ SIM ကဒ္တစ္ခုကုိ ၈ ရင္းဂစ္ပဲရွိတယ္ ျမန္မာေငြနဲ႔တြက္ရင္ ၃၀၀၀ ေတာင္မျပည့္ေသးဘူးဗ်ိဳ႕.....
Why should we wait for the time is coming, what we can do for the best we can do it, why they ( other nation ) can do it, why can't we do it? they are developed now because of why they can do it, why are WE? Pls think about it our clean goverment, the people are ( our people ) so poor and late then other nation ( our neightbour country ), it's no-one can deny that. we do hope you ( Clean goverment ) can do the best for the our poor people, We believe you can do it! They can do it why can't we? In Malaysia 1 sim card is RM10 ( 2500 kyats ) why can you sell 5000 kyatsasim card in Myanmar. It's double, it's also can't you sell for the our poor people? It's we need to be corporate and ask from the Clean Government. Haveanice day Myanmar. God bless you.